Akụkọ banyere Hydroponics: Kedu mgbe e mepụtara Hydroponics? - Ihe Ndị Bụ Isi
Akụkọ banyere Hydroponics: Kedu mgbe e mepụtara Hydroponics?
N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe, hydroponics bụ omume nke ịkọ ahịhịa na-eji naanị mmiri, nri, na ọkara na-eto eto. Okwu hydroponics sitere na mgbọrọgwụ 'hydro', nke pụtara mmiri, na 'ponos', nke pụtara ọrụ, usoro a nke ịkọ ugbo anaghị eji ala.
Da akwa tech na futuristic, nri? Ọ bụghị .
Ogige Nghọta nke Babịlọn
Ihe omuma mbu nke hydroponics malitere na Ogige Nguzogide nke Babilọn na Ugbo Osimiri nke China. Mụ mmadụ ji usoro ndị a mee ọtụtụ puku afọ gara aga. Ọ bụ ezie na usoro izugbe hydroponics ka bụ otu, teknụzụ ọgbara ọhụrụ enyerela anyị aka itolite ihe ọkụkụ, gbasie ike, na ahụike.
Hydroponics nke oge a
Ihe mbu eji zoo aka na hydroponics (afo 100 gara aga) bu site otu nwoke aha ya bụ William Frederick Gericke . Mgbe ọ na-arụ ọrụ na Mahadum California, Berkeley, ọ malitere ịkọwapụta echiche bụ na a ga-akụ osisi na ihe ngwọta nke nri na mmiri kama ala.
Dị ka o kwesịrị ịdị, ọha na eze, yana ndị ọrụ ibe William, nwere obi abụọ banyere nkwupụta a.
O gosipụtara ngwa ngwa na ha ezighi ezi site na-eto eto vaịn 25 dị elu nke tomato na-eji naanị mmiri na nri.
olee oge kacha mma iji gbaa ogige
O kpebiri ịkpọ usoro a na-eto eto hydroponics . Nsonaazụ jọgburu onwe ya nke nnwale Gericke na tomato kpaliri nyocha ọzọ n'ọhịa. Ndị ọkà mmụta sayensị na Mahadum California mere nnyocha ndị ọzọ, bụ ndị kpughere ọtụtụ uru metụtara ịkọ ihe na ahịhịa na-enweghị ala.
Uru nke Hydroponics
Otu n'ime nnukwu uru ndị hydroponics nwere karịa ala na-eto eto bụ nchekwa mmiri. Mgbe onye na-eme ihe ọkụkụ na-akụ ahịhịa n’ime ala, ọ ghaghị inwe ahụmahụ nke ọma ịmata ókè mmiri ga-enye osisi ya. Ukwuu na mgbọrọgwụ osisi ahụ enweghị ike ịnweta oxygen zuru oke. Obere na osisi nwere ike ihicha ma nwuo.
Hydroponics na - edozi nsogbu a n’ụzọ atọ dị iche iche.
Oxygenated Edozi edozi
Mmiri mmiri nwere ike ikuku oxygen mgbe niile, na-ejide n'aka na mgbọrọgwụ osisi na-enweta ọkwa kachasị mma nke oxygen. Ọzọkwa, a na-edozi nsogbu nke ịgbara mmiri site n'eziokwu na usoro mgbọrọgwụ osisi ahụ enweghịzi ala gbara ya gburugburu, na-egbochi nnabata oxygen site na mgbọrọgwụ.
Na-eji Obere Mmiri
Hydroponics na eji mmiri pere mpe karia ugbo ala n'ihi na enwere ike iweghachite ya. Na ugbo ugbo ala, a na-agbanye mmiri na ala ma na-abanye n'ime ala. Naanị obere akụkụ nke mmiri ka osisi ahụ na-eji eme ihe n'ezie. Hydroponics na-enye ohere ka emegharị mmiri ahụ ọzọ n’ime mmiri ahụ, dị njikere maka ojiji n’ọdịnihu. Na akọrọ na efekarị na mpaghara, nke a bụ oke uru.
Njikọ Na-eto Eto
Nke ikpeazu Isi uru nke hydroponics bụ ọnụọgụ njikwa nke onye na-akụ ọkụkụ nwere gburugburu ebe obibi. Ahụhụ na ahụhụ na - adịkarị mfe obibi - a na - ebugharị gburugburu ebe obibi gị ma bulie ya na ala. Nke a na - eme ka o siere ahụhụ ike irute osisi gị. Ọ bụla ala na-metụtara ọrịa na-kpamkpam dee oyi na hydroponics nakwa. N'ikpeazụ, ị na-enwe ike ijikwa ọnụ ọgụgụ nke ihe oriri na-enye osisi gị kpọmkwem, na-echekwa ihe oriri na-edozi ahụ.
Ugbo nke Ọdịnihu
Site na uru ndị a niile, ọ dị ka a ga - asị na ọ dịghị ihe dị njọ na hydroponics! Ọ bụghị eziokwu kpamkpam. Ala na - eme dị ka ihe nchekwa maka njehie na - eto eto - na hydroponics, njehie na - efu oke ọnụ ma nwee ike imebi ihe ọkụkụ niile. Na mgbakwunye, ọkwa dị elu nke iru mmiri na-akpọ ero na ebù na sistemụ, nke nwere ike ibibi ihe ọkụkụ.
N'uche m, ndị a bụ obere ọnụahịa iji kwụọ ụgwọ maka nnukwu ndozi nke hydroponics nwere karịa ụzọ ndị na-eto eto. Anyị na-ahụ ụlọ greenhouses hydroponic azụmahịa na-agbapụta gburugburu ụwa.
N'ime ụwa ebe mmiri na mmiri dị ọhụrụ bụ nsogbu dị ọkụ a, ahụrụ m hydroponics dị ka ụzọ bụ isi a ga-esi dozie nsogbu ndị a n'ụzọ ga-adigide na gburugburu ebe obibi. Ihe ubi nke ọdịnihu amalitela!
Chọrọ ịmụ ka hydroponics si arụ ọrụ? Lelee ederede na-esote na usoro Hydroponics Site na Scratch - Hydroponics maka ndị mbido !
esi egbu ọnụ ọgụgụ na osisi
esi eto ọcha sage si mkpụrụ